Axmed Diidaat: Diin-faafiye Saamayn Yeeshay – Cabdicasiis Guudcadde
July 21, 2015 February 11, 2016 Guudcadde
Axmed Diidaat: Diin-faafiye Saamayn Yeeshay
“Joogiddaada iyo la’aantaadu Islaamka waa isugu mid, balse adigu Islaamka la’aantii waad khasaaraysaa” ~ Diidaat (1918 – 2005).
Gu’gii 1918 bishii Julay kowdeedii ayuu deegaanka [Tadkeshwar, Surat, Bombay Presidency, British India] ku dhashay wiilka isu rogay aqoonyahanka weyn ee diinta Islaamka isaga oo faafinaya ay geeridu u timi, Axmed Xuseen Diidaat (Axmed Deedat).
Isaga oo markaa uun dhashay ayuu Aabbihii, oo dawaarle/Harqaanle ahaa, ka tegey una qaxay dalka Koonfur-Afrika. Markii uu 9 jir noqday ayuu Diidaat u soo ambabaxay xaggaa iyo Aabbihii oo deggenaa meesha hadda loo yaqaan Kwazulu-Natal. Aqoon dugsi iyo cilmi aasaasi ah, dhanna, ma uu lahayn Axmed xilligaa. Hooyadii ka soo tegistiisii Hindiya waxba kama ay danbayn, oo 1927 waxa ay ahayd ammintii isugu danbaysay labadooda.
Waxbarasho ayuu hore ka bilaabay. Iska daa in uu caqabaddii luuqadeed ee haysatay ka gudbee waxa uu kaalmo sare ka galay iskuulkiisii, waxa uuna ka soo dhalaalay tacliintii. Wax akhriska oo uu balwad ka dhigtay ayaa caawiyay. Dedaalkiisii ayuu wadey illaa uu ka gaadho fasalka lixaad oo uu si guul ah u idlaysto. Sababo dhaqaale ayuu Diidaat waxbarashadii uga hadhay. In uu shaqaysto ayuu bilaabay. Hawl buuran waxa uu bilaabay 1936 markii uu ka shaqo galay meherad agabka hurdada iyo xafiisyada gadda oo uu leeyahay nin Muslim ahi.
Muddadii uu shaqaalaha ka ahaa goobtan ayuu la kulmay diin-faafiyaal Nasaaro ah oo ka hawlgeli jiray goob u dhow meheradda uu ka shaqeeyo, oo ku taallay Natal South Coast. Kuwaas oo dedaalladooda diin-ka-saaridda ahi la gashay in ay wax ka sheegaan qaabkii uu nebi Maxamed u faafin jiray diinta Islaamka, taas oo ay ku sheegi jireen in uu ahaa ‘Qori caaradii’ isaga oo seef ku soo islaaminaya dadka. Axmed Diidaat doodahoodaa ayuu u dheg raariciyay daneeyayna. Halkan ayuu ka bilaabay geeddigiisa dersidda Isbabardhigga diimaha.
Damcaddii uu u hayay in uu hawshan ka gun gaadho ayaa cirka isku sii shareertay ka dib markii uu la kulmay buugga Idhaarul-xaq oo uu qoray M. Rahmatullah Kairanvi, kaas oo si baxsan u soo koobayay dedaalladii diin-faafiyaasha Kiristanku kaga hawlgalayeen dalka Hindiya qarni ka hor, xilligan la qoray buugga iyo burburinta doodahooda [Buugga oo PDF ah waxa aad kala degi kartaa halkan].
Buuggu waxa uu Diidaat baray wax badan oo ku saabsan Baybalka, waxa uuna ku caawiyay in uu ku dhaqaajiyo xawaare sare doonistiisa in uu waxan barto. Akhris iyo baadhis dheeraad ah ayuu sameeyay, raggii ugu iman jiray meheradda si ay diinta Nasaarada uga dhaadhiciyaanna waydiimo ad adag ayuu kala hor yimi, doodo ayaanay madaxa isla geli jireen, waana ay u maara waayi jireen su’aalihiisa aad mooddo in uu ku tooganayo!
U dhug yeelasho iyo barasho xagga diinta ah ayuu u holladay, isaga oo xaadiray dugsi maxalli ah oo ay lahaayeen Muslimiintu oo uu haystay nin la dhihi jiray Fairfax. Firfircoonaantiisii markii uu la tacajabay, ayuu macallin Fairfax u bilaabay Diidaat casharro dheeri ah oo gaar ah kuna saabsan diintan Nasaarada iyo buugga Injiil. Aakhirkiina waxa uu ku wareejiyay in uu bare ka noqdo fasalkii, halkaa oo uu saddex sanno ka ahaa macallin.
Wixii 1942 ka bilaabmay Diidaat waxa uu si toos ah u bilaabay dacwadda iyo faafinta diinta Islaamka. Khudbaddiisii u horreysay waxa ay ahayd “Maxamed: Ergaygii Nabadda – Mohammed: Messenger of Peace”, waxaana dhegaystayaal u ahaa keliyaata 15 qof, deegaanka Durban! Masaajidda iyo goobaha dadku isugu iman karaan sida dhismayaasha shaleemooyinka ah ayuu Diidaat ka bilaabay dacwaddiisii.
Wixii intaa ka danbaysay Diidaat waxa uu isu rogay diin-faafiye saamayn weyn leh, waxa uu qoray, si bilaash ah dhawr milyan oo nuqulna uga bixiyay, dhawr buug oo uu ugu caansan yahay The Choice: Islam and Christianity, lana daabacay Abriil 1993, isaga oo bilaa lacag ah ayaana laga helayay goobaha diin-faafinta Waqooyiga Ameerika oo idil. Wax ka badan 25 000 oo nuqul ayaa lagu daabacay madbacadaha bariga dhexe.
Buugtiisa kale ee iyaguna caanka ah waxa ka mid ah:
Waxqabadyada Sh. Axmed Diidaat ee ugu waaweyni waa doodihii uu la galay, ee uu ku tumay, madaxya weyntii Kiristanka. Waxaana u caansan doodihii labada ahaaa ee uu la galay Kiristanka Falastiinniga ah ee Anis Shorrosh; ta koowaad oo ahayd Is Jesus God?, “Ciise Ilaah miyuu yahay?”, sannadkii 1985 Diseenbar, ka dhacday hoolka Royal Albert, Landhan. Iyo ta labaad oo ahayd The Qur’an or The Bible: Which is God’s Word?, “Qur’aanka mise Baybalka: Kee ayaa ah Hadalkii Eebbe?”, kana qabsoontay 7 Ogos 1988 Birmingham UK oo qaadatay muddo dhan 4 saacadood, macal wayddiimo-iyo-warcellinnadeedii. Iyo doodda uu la galay, ee uu ku rifay, Jimmy Swaggart (oo ahaa ragga u cadcad Masiixiyadda Injiiliga ah – Evangelical Christianity), cinwaankeeduna ahaa Is The Bible the Word of God?, “Baybalku Miyuu yahay Hadalkii Eebbe?”, kana dhacday magaalada Swaggart u dhashay ee Baton Rouge, Louisiana, Noofeembar 1986 oo ay ka soo xaadireen in ka badan 800 000 (Siddeed boqol oo kun) oo qofi!
Waxa uu idil ahaan doodaha uu galay Sheekhu ka soo hooyay guulo wax ku ool ah. Waxa intaa u dheer khudbadaha tirada beelay ee uu digada iyo dambaska kaga dhigayo diinta ay farafarayeen ee Nasaarada. (YouTube ayaad ka baadhi kartaa kana heli kartaa dhammaan doodihiisa iyo khudbadihiisaba).
Waxa uu bud dhigay As-salaam; mac-had lagu tabobbaro diin-faafiyayaasha. Waxa uu sidoo kale ka mid ahaa aas aasayaashii xarunta IPCI (Islamic Propagation Center International) oo ku taal Durban, gu’gii 1957, marna madaxweyne ayuu ka noqday.
Dedaalkiisii markii uu hakan waayay ee uu genbiyada jabsaday ayuu mutaystay abaal marinta caalamiga ah ee boqor Faysalka Sucuudiga oo la siiyo dadka u adeega una dhaqdhaqaada diinta Islaamka, sanaddii 1986.
Nuqul shahaadadaas ah oo afka Ingiriisida loo haltebiyay ayaan ka soo qaatay dabarkan (http://www.institutealislam.com/sheikh-ahmed-deedat/ ) waana tan:
3’dii May sannadkii 1996 ayuu soo riday faalig sariirta ku eekaysiiyay, kaas oo ka abbaaray qoorta kana dhigay mid aan hadli karin waxna liqi karin. Cisbitalka Boqor Faysal ee magaalada Riyaad ayaa la dhigay, balse waa laga dayriyay xaaladdiisa. Waa la soo celiyay, muddo sagaal gu’ ahna sariirta gurigiisa ayay ku haysay xaaskiisa Xaawa Diidaat. Isagoo geerida sugaya ayuu haddana dadka ku boorrinayay in ay diinta ogaadaan. (Muddadii uu cisbitalka yaallay ayuu bartay xidhiidhka dadka lala sameeyo ee xagga indhaha ah, isaga oo ansixinaya hadba erayada loo yeedhiyo, lagana yeedhiyo tax erayo ah oo hortiisa la soo dhigayo; sidaa ayuu dadka kula hadli jiray muddadaas, loona kala dab qaadi jiray). Waxa uu helay dhambaallo hambalyayn, mahadnaq iyo duco isugu jira, dadna iyaga oo lugaynaya ayaabay u yimaaddeen, intaa waxa lagu bogaadinayay hawshiisii wanaagsanayd ee soo taxnayd 1942 ilaa 1996 ee u hiilinta diinta Islaamka iyo burinta khuraafaadka laga faafiyay diintii wanaagsanayd ee Ciise, NKH.
Wax uu sidaa ahaadaba, xaqii ayaa u yimi 8’dii Ogos 2005, isaga oo ku xijaabtay gurigiisii ku yaallay (Waddada Trevennen ee degmada Verulam, gobolka KwaZulu-Natal), waxaana lagu aasay, Eebbe ha u naxariistee, xabaalaha Verulam. 87 jir ayuu dunida kaga tegey. Xaaskiisii sanad ka dib, 28 Ogos 2006, ayay ku geeriyootay da’da 85.
Maxaa laga taran san karaa noloshii Axmed Diidaat. EHU?
Muhiim ma aha in aad leedahay aqoon aasaasi ah si aad u samaysid isbeddel la taaban karo.
Iswaydiinta iyo fekeridda toolmoon ee kaa gasha arrin oo aanad ka daba hadhin kana caajisini waxa ay keensataa in aad arrinkaa ka midho dhalisid, kana soo horiyodaba wareegtid.
Si aad aqoonta aad u baahan tahay uga gaadhid heer sare, waa in aad la timaaddid laba qodob; akhris badan iyo uga martiyidda ciddii ehel u ah.
Waxa aynnu noloshii Sh. Diidaat ka baran karnaa qaabka u qumman ee doodaha la isugu soo diyaarin lahaa, loo dhiibto aragtidaada, loogana lib keeno adiga oo aan ku soohdin-gudbayn xorriyadda ruuxa dhanka kale ah.
Waa inta aan is idhi waa ay u muhiimsan yihiin, ee akhriste wixii kale ee aad u aragtid muhiim hoosta ka xarriiqo.
Goolam Vahed, Obituary: Ahmed Hoosen Deedat, Department of History, University of KwaZulu Natal.
David Westerlund (2003), Ahmed Deedat’s Theology of Religion: Apologetics through Polemics. Journal of Religion in Africa, 33(3).
Asim Khan (21 January 2006), The life of Shaikh Ahmed Deedat at the Wayback Machine (la kaydiyay February 25, 2007), (laga heli karo Aljazeera.net).
Imran Garda (2006), Demystifying Islam and Debating Christianity.
Degelka Sheekha ee www.ahmed-deedat.net .
Previous Sidii Berigii …!
Next “Halkani Waa…” 